Pfuti huru uye vakaurayiwa: Magandanga ane zvombo anomhanyisa hotera yepamusoro muMogadishu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Pfuti huru uye vakaurayiwa: Magandanga ane zvombo anomhanyisa hotera yepamusoro muMogadishu
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • chengetedzo • Somalia Kuvhuna Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Magandanga ane zvombo anopinda muhotera yepamusoro muMogadishu
Chikwata chemagandanga ane zvombo zvakanyanya, vachizviti ndevamwe veboka reIslamist-based Islamist Al-Shabab, vari kupinda muSYL Hotel muMogadishu, Somalia, sekutaura kwenhau. Ihotera yepamusoro inowanzoitirwa nevakuru vehurumende uye vezvematongerwo enyika
Iye anoona ari kutaura kuti pfuti inorema inogona kunzwika mukati meimba, kunyangwe zvisina kujeka kuti vanhu vangani vari mukati. Vamwewo vakati varwisi ava vakapfeka yunifomu dzevashandi vekuSomalia.
"Isu taifunga kuti mapurisa asi vakatanga kukanda magirinedhi nekutidzinga pavakange vava pedyo saka takachinjana moto pagedhi rehotera," mupurisa akaudza Reuters.
Mumwe muparamende akapunyuka kubva munzvimbo iyi akaudza vamwe kuti pane vanhu vakafa, asi izvi hazvisati zvasimbiswa.
Mauto ekuSomalia anoti auraya vatatu vevairwisa uye vanoti vakakwanisa kuburitsa vakuru muhotera iyi apo kurwisa kwacho kwakatanga.
Al-Shabab yakanangana nehotera iyi nekurwiswa nemabhomba emotokari muna Kukadzi 2016, ichiuraya vanhu gumi nevasere kusanganisira varwi vashanu uye zvichikanganisa zvikuru zvivakwa zviri pedyo.